Falanqeynta Kulanka Horyaalka Premier League Ee Isbuuca 1aad West Brom v Liverpool. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Horyaalka Premier League Ee Isbuuca 1aad West Brom v Liverpool.
Ka dib markii uu si joogta ah ugu biiray West Brom Ben Foster ayaa la filayaa inuu goolka ku bilaaban doono, halka ciyaartoyda amaahda ku timid Lukaku iyo Yassine El Ghanassy labadoodaba la filayo inay ciyaaraan, iyadoo Lukaku loo badinayo inuu ku soo bilbaanayo. Ciyaaryahan kale oo ay xagaagan la soo wareegeen Claudio Jacub ayaa isna la filayaa inuu ka garab ciyaaro booska burburiyaha Youssouf Mulumbu, taasoo ka dhigeysa in James Morrison iyo Graham Dorrans ay ku dagaalamaan booska kubadsameeyaha.
West Brom ayaa sidoo kale si bilaash ah kula soo wareegtay Markus Rosenberg laakiin waxa ay u badan tahay inuu kursiga keydka ku bilaaban doono madaama Lukaku uu yahay weeraryahan soo jiidasho leh. Peter Odemwingie ayaa laga yaabaa in la ciyaarsiiyo garab weerar, taasoo ka dhigeysa in tababare Steve Clarke uu heysto Shane Long iyo Marc-Antoine Fortune weeraryahano kale oo uu soo xulan karo.
Liverpool ayaa sidoo kale iyadana ku bilaabaneysa horyaalka Premier League tababare cusub, Brendan Rodgers ayay u badan tahay inuu la soo shirtagi doono wajiyo cusub. Iyadoo Alberto Aquilani uu kooxda ka tagay kuna biiray Fiorentina, Joe Allen oo ay dhawaan la soo wareegeen ayaa laga yaabaa inuu khadka dhexe kala ciyaaro Lucas iyo Steven Gerrard. Si kasta ciyaaryahanka reer Wales oo dhawaan ka soo laabtay ciyaaraha Olimbikada ayaa ay macquul tahay in keyd uu ku soo bilowdo, iyadoo Jonjo Shelvey oo qaab ciyaareed fiican soo bandhigay fasixii xagaaga laga yaabo in fursad la siiyo.
Dhinaca kale weeraryahanka cusub Fabio Borini ayaa hogaamin doona weerarka kooxda ka dib markii ay soo muuqatay in Andy Carroll uu ka dhacay xiisaha tababarihiisa, islamarkaana laga yaabo inuu Liverpool ka tago. Joe Cole oo kooxda ku sii negaanaya ka dib markii uu amaah ku soo qaatay Lille xilli ciyaareedkii hore ayay macquul tahay inuu qeyb ka noqdo seddexda weeraryahan hadii uu ka soo kabsado dhaawaciii uu ku maqnaa, hadii kalena Stewart Downing ayaa bedelkiisa ciyaari doona, halka weerarka uu dhameystiri doono Luis Suarez.
Tababaraha Waqooyiga Ireland ayaa lagu xamanayaa inuu weli xiiseynayo inuu ciyaaryahano ku biiriyo kooxda, iyadoo si aad ah loola xiriirinayo xiddiga Real Madrid Nuri Sahin iyo xiddiga Fulham Clint Dempsey, laakiin waxa ay u muuqataa xitaa hadii ay heshiis la gaaraan inay sugi doonaan maalin kale oo ay kooxda u ciyaaraan, ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee kooxda ku soo biira Oussama Assaidi ayaa isna la filayaa inuusan ciyaari doonin kulanka maanta.
Tababaraha kooxda West Brom Steve Clarke ayaa tababare ku xigeen ka soo ahaa Liverpool xili ciyaareedkii hore. Clarke ayaana shaqadiisa ka tagay markii Daglish la ceyriyay bishii May ee sannadkan.
West Brom ayaa laga badiyay seddexdii kulan ee ugu horeysay fasixii xagaaga, lakiin lagama badinin lixdii ka danbeysay, iyagoo badiyay afar kulan barbaro galayna labo kale, iyagoo dhaliyay 13 gool.
West Brom ayaa laga dhigay tirada ugu badneyd ee rigoorayaal xilli ciyaareedkii hore oo gaareysa 9 rigoore. Halka weeraryahanka Liverpool Luis Saurez uu ku guuleystay laadad xor ah in ka badan ciyaaryahano kale oo ka horyimid kooxda xilli ciyaareedkii hore, ilaa iyo 4 laadad xor ah.
Liverpool ayaa ciyaartaan wajaheysa iyadoo soo badisay seddexdii kulan ee ugu danbeysay oo ay ku jirto labadii kulane ee isreebreebka Europa League ee FC Gomel, iyo kulankoodii ugu danbeeyay ee saaxiibtinimo ee Bayer Leverkusen.
Si kastaba, seddexdoodii kulan ee saaxiibtinimo ee ka horeysay waxa ay ku guuldareysteen inay badiyaan iyagoo barbaro la gashay Tottenham iyo Toronto, halka guuldarro ay ka soo gaartay Roma.
Liverpool ayaa kubado birta ku dhufatay xilli ciyaareedkii hore in ka badan kooxaha kale taariikhda premier League, waxaana ay birta garaaceen 33 jeer.
Xilli ciyaareedkii hore labadii kulan ee Premier League ee labadaan kooxood dhexmaray, Liverpool ayaa bishii October guul 2-0 ku gaartay garoonka Hawthorns, ka hor inta aysan West Brom guul 1-0 ah ku gaarin Anfield bishii Aprill.
Sadaal ka bixi kulanka ugu horeeya ee Liverpool iyo West Brom ee xilli ciyaareedkaan cusub 2012-13?